Madaxweyne Xigeenka Somaliland Oo Kormeeray Hay’adda Korontadda Hargeysa Iyo Xarunta Agoomaha | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN) Madaxweyne xigeenka Somaliland, isla markaana ah ku simaha Madaxweynaha Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdillaahi (Saylici) ayaa saaka barqadii kormeeray xarumaha Hay’adda korontadda ee Hargeysa iyo xarunta Agoomaha. Madaxweyne Xigeenka Somaliland C/raxmaan Seylici, waxa
uu ka bilaabay kormeerkiisa Hay’adda Korontada Dawlada ee hargeysa, isagoo kusoo wareegay dhamaan qaybaha kala duwan ee dhismaha xarunta Korontadda, Maareeyaha Hay’adda Korontada Dawlada, Maxamed Axmed Aadan (Weli-xaawo).
ayaa Madaxweyne xigeenka siiyay warbixin uu ku sharaxayo qaabka ay u shaqayso, baahiyaha iyo duruufaha shaqo ee ku gedaaman iyo halka ay wax marayaan. Mr. Weli Xaawo oo laba todobaaad ka hor xilka Hay’addaa la wareegay ayaa ka sheekeeyay dhibaatooyinka uu kala kulmay baylahda qabyo ee ka jirtaa iyo inta caqabadaha hor yaal.
sidoo waxa uu Madaxweyne xigeenka uga waramay sida aanay hawl-wadeenada Hay’adda korontadu dadweynaha uga soo ururin lacagta, isagoo xusay inay dad badani u haystaan in aanu lacag ahayn Laydhka Dawladu oo ay ula bexeen “Laydhkii Illaahay”. Sidaana ay lacag badani kaga baaqato. Laakiin waxa uu sheegay Mareeyaha Hay’adda Korontadu inay qaadi doonaan talaaboyin wax ku ool
ah oo wax lagaga qaban doono qaabka shaqo iyo dhaliilaha ka jira Hay’addan.
“Waa Hay’ad Madaxbanaan oo Qaranku leeyahay, waxa haboon in aad si cadaalad ah oo xaq ah ugu maamushaan shaqaalaha iyo dadweynaha labadaba, isla markaana,waad u madaxbanaan tihiin in aad talaabo wax ku ool ah ka qaadaan wax kasta oo ka horimanaya shaqadiina.” Sidaa waxa yidhi
Madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha Madaxweynaha, Md. Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdilaahi (Saylici). Oo la hadlayay Maareeyaha Hay’adda Korontada ee Hargeysa.
Sidoo kale Madaxweyne Xigeenka Somaliland C/raxmaan Seylici, wuxuu kormeer kusoo maray xarunta Agoomaha ee hargeysa, iyadoo ujeedada kormeerka lagu sheegay sidii uu wax uga ogaan lahaa xaalada nololeed ee xarunta Agoomaha Hargeysa.